साग ओलम्पिक टर्च सातै प्रदेशमा पुर्याइने , कहिले-कहिले कहाँ ? | Samajik Khabar
Home खेलकुद साग ओलम्पिक टर्च सातै प्रदेशमा पुर्याइने , कहिले-कहिले कहाँ ?
मंसिर ७, काठमाडौं । दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग) को १३ औं संस्करणको उद्घाटन दिन मंसिर १५ गते दीप प्रज्ज्वलन गरिने ओलम्पिक टर्चको र्याली शुक्रबारदेखि सुरु भएको छ ।
सातै प्रदेशका मुख्य शहरमा पुर्याइने टर्चको र्याली स्वयम्भु स्टुपादेखि सुरु गरिएको हो । र्यालीको नेतृत्व नेपाललाई पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाएका म्याराथन धावक जितबहादुर केसीले गरेका हुन् ।
पहिलो दिन र्याली प्रदेश १ को विराटनगर, दोश्रो दिन प्रदेश २ को जनकपुर, तेश्रो दिन प्रदेश ३ को हेटौंडा र चितवन, चौथो दिन प्रदेश ५ को लुम्बिनी र बुटवल, पाँचौं दिन कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र प्रदेश ५ को नेपालगन्ज, छैटौं दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढी तथा सातौं गण्डकी प्रदेशको पोखरा लगिने छ ।
आठौं दिन टर्चलाई पोखरामा नगर परिक्रमा गराइ टर्चलाई काठमाडौं ल्याइने छ । नवौं दिन काठमाडौंको विभिन्न स्थान परिक्रमा गराइ त्यसै दिन साग उद्घाटनस्थल दशरथ रंगशालामा टर्चबाट दीप प्रज्ज्वलन गरिने कार्यक्रम छ ।
Previous article‘अकुपाई टुँडिखेल’ अभियानको तेस्रो कार्यक्रम आज
Next articleसाग फुटबलमा नेपालको भिडन्त को-को संग?